नवलपरासीलाई भलिबलको उपाधि
Published: January 2, 2016 19:31 PM
मासिक ७ लाख तलब खाने फुटबल प्रशिक्षकले नेपाललाई ‘धोका’ दिँदै छन् ?
Published: January 3, 2016 07:24 AM
काठमाडौं, पुस १८ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक प्याट्रिक असेम्सले नेपाल छाड्ने संकेत गरेका छन् ।श्रीमती बिरामी भएको भन्दै घर फर्किएका बेल्जियन प्रशिक्षक असेम्सले शनिबार सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमार्फत् नेपाल छाड्ने संकेत गरेका हुन् ।भारतमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि नेपाल आएको एक घन्टामै...
आजको खेल बार्सिलोना र एथलेटिको मड्रिडले जित्ला ?
Published: January 2, 2016 12:50 PM
काठमाडौं, पुस १८ । स्पेनिस लिग ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आज(शनिबार) उपाधी दाबेदार बार्सिलोनाले इस्पानुयलको सामना गर्दै छ । खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने ९ बजे इस्पानुयलको मैदानमा हुँदै छ । ला लिगा फुटबलअन्तर्गत राति सवा १ बजे अर्को दाबेदार एथलेटिको मड्रिड र लेभान्ते भिड्दै छन् । १७...
इङ्लिस प्रिमियर लिगमा आज आठ खेल हुने
Published: January 2, 2016 11:48 AM
काठमाडौं, पुस १८ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार ८ खेल हुँदै छन् । २० औं चरणका खेलअन्तर्गत नेपाली समय अनुसार साँझ साढे ६ बजे वेष्टहाम युनाइटेडले घरेलु मैदानमा लिभरपुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत राति पौने ९ बजे आर्सनल र न्युकासल युनाइटेड, लेष्टर सिटी र एएफ्सी बोर्नमाउथ,...
युरोपियन फुटबल बजारमा खेलाडी किनबेच हुँदै
Published: January 1, 2016 12:50 PM
काठमाडौं, पुस १७ । युरोपियन फुटबल बजारमा खेलाडी किनबेचको सिजन भोलिबाट सुरु हुँदैछ । औपचारिक भाषामा ‘ट्रान्सफर विन्डो’ भनिने यो समयमा युरोपका जुनसुकै क्लबले खेलाडीलाई स्थायी वा अस्थायी करारमा भित्र्याउन सक्छन् । सामान्यतयः जुन, जुलाई र अगष्ट तीन महिनाको समयलाई ट्रान्सफर विन्डो मानिन्छ । तर जनवरीमा पनि...
साफ च्याम्पियनसिप उपाधिका लागि भारत र अफगानिस्तान भिड्ने
Published: January 1, 2016 10:28 AM
काठमाडौं, पुस १७ । साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भारत र अफगानिस्तान भिड्ने भएका छन् । भारतको केरलामा भएको सेमिफाइनलमा भारतले माल्दिभ्सलाई र अफगानिस्तानले श्रीलंकालाई पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन् । पहिलो सेमिफाइनलमा माल्दिभ्सलाई ३–२ गोलअन्तरले...
रोनाल्डो र भाजक्वेजको गोलले रियल मड्रिडलाई विजयी
Published: December 31, 2015 13:40 PM
काठमाडौं, पुस १६ । स्पेनिस लिग ला लिगा फुटबलमा दाबेदारहरु रियल मड्रिड र बार्सिलोना बिजयी भएका छन् । बुधबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिडले रियल सोसिडाडलाई ३–१ गोल अन्तरले हरायो । घरेलु मैदानमा रियललाई बिजयी गराउन क्रिश्चियानो रोनाल्डोले २ तथा भाजक्वेजले १ गोल गरे । ला...
बार्सिलोनाका लागि ५०० म्याच खेलेर मेस्सीले गरे ४२५ गोल
Published: December 31, 2015 10:03 AM
काठमाडौं, पुस १६ । स्पेनिश क्लव ‘बार्सिलोना’ का लागि अर्जेन्टिनी स्टाइकर लियोनेल मेस्सीले ५०० म्याच खेलेर कोशेढुंगा बनाएका छन् । उनले ५०० म्याचमा बार्सिलोनाका लागि ४२५ गोल गरेका छन् । गएराति सम्पन्न खेलमा मेस्सीले यो कोशेढुंगा पार गरेका हुन् । रियल बाटिसविरुद्धको म्याच मेस्सीका लागि बार्सिलोनाको जर्सीमा...
आज अफ्गानिस्तान र श्रीलंका तथा भारत र माल्दिभ्सबीच रोमाञ्चक भिडन्त
Published: December 31, 2015 07:45 AM
काठमाडौं, पुस १६ । साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनल खेलहरु आज(बिहीबार) हुँदैछन् । भारतको केरलामा जारी प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा साविक विजेता अफ्गानिस्तान र श्रीलंका भिड्नेछन् । समुह चरणमा शत प्रतिशत विजयी नतिजा निकाल्दै समुह विजेता बनेको अफ्गानिस्तान उपाधिको मुख्य दावेदार टोली हो । ...
क्रिश्चियन बेन्टेकेको गोलले लिभरपुल विजयी
Published: December 31, 2015 07:30 AM
काठमाडौं, पुस १६ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा लिभरपुल विजयी भएको छ । सण्डरल्याण्डको मैदानमा भएको खेलमा लिभरपुल १–० ले विजयी भएको हो । खेलमा लिभरपुललाई विजयी गराउन बेल्जियन खेलाडी क्रिश्चियन बेन्टेकेले दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो । ...
टेनिसको उपाधि श्रीरामलाई
Published: December 30, 2015 19:07 PM
पोखरा, पुस १५ । पोखरामा सम्पन्न १३औं पोखरा भेट्रान्स राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि श्रीराम मगरले जितेका छन् ।फाइनलमा कमल भण्डारीलाई १–६, ७–५ र १०–७ को कठिन सेटमा पराजित गर्दै मगरले उपाधि जितेका हुन् । उपाधिसँगै मगरले नगद ५० हजार तथा उप–विजेता भण्डारीले २० हजार हात पारे ।प्रतियोगितामा ३५ वर्षमाथि...
हात्ती महोत्सवः एकताकली ‘बी’लाई ‘फास्टवाक’को उपाधि
Published: December 30, 2015 18:28 PM
चितवन, पुस १५ । पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहामा भएको १२औं चितवन हात्ती महोत्सवअन्तर्गत्को हात्तीको ‘फास्टवाक’को उपाधि एकताकली ‘बी’ले चुमेको छ ।बुधबार भएको फाइनलमा पाँच प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै एकताकली ‘बी’ पहिलो भएको हो । एलिशाकली दोस्रो तथा मारुतीकली तेस्रो भए ।यसैगरी, हात्तीका छावाहरुको...
विश्वकप क्रिकेटको तयारीमा रहेको यू–१९ टोली भारत प्रस्थान
Published: December 30, 2015 12:26 PM
काठमाडौं, पुस १५ । बंगलादेशमा हुने आईसीसी अन्डर–नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटको तयारीमा रहेको नेपाली युवा टोली अभ्यासको लागि बुधबार भारत प्रस्थान गरेको छ । सन् २०१६ को जनवरी २२ देखि बंगलादेशमा हुने आइसीसी अन्डर–नाइन्टिन विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप अभ्यास तथा प्रशिक्षणका लागि २४ सदस्यीय नेपाली...
लेष्टर सिटी र म्यानचेष्टर सिटीबीचको खेल गोलरहित टुङ्गियो
Published: December 30, 2015 07:38 AM
काठमाडौं, पुस १५ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा लेष्टर सिटी र म्यानचेष्टर सिटीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् । लेष्टर सिटीको मैदान किङ पावर स्टेडियममा भएको खेलमा दुबै टोलीले केही राम्रा अवसरहरु सिर्जना गरे पनि गोल गर्न नसक्दा अंक बाँडेका हुन् । यो...
रियो ओलम्पिकमा रुसी एथ्लेटिक्स खेलाडी सहभागी नहुने सम्भावना
Published: December 30, 2015 07:31 AM
काठमाडौं, पुस १५ । ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा आगामी वर्ष हुने ओलम्पिक खेलकुदमा रुसी एथ्लेटिक्स खेलाडीले सहभागिता जनाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गरेको छ । युरोपियन एथ्लेटिक्सका प्रमुख स्वेन आर्ने हान्सेनले रियो ओलम्पिकमा एथ्लेटिक्स खेलतर्फ रुसको सहभागि हुने सम्भावना अत्यन्तै कमजोर बनेको बताएका हुन । ...